जब सुशील प्याकुरेलहरु प्याक प्याक परे... - Jhilko
जब सुशील प्याकुरेलहरु प्याक प्याक परे...
काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपाले माघ ४ गते सभामुख नेता अग्नि सापकोटलाई बनाउने निर्णय गरे लगत्तै एउटा आईएनजीओ इन्सेकले तुरुन्तै विज्ञप्ति जारी गरेर नेकपा निर्णयलाई चुनौति दियो । त्यो अरु कसैको आईएनजीओ थिएन, थियो त सुशील प्याकुरेलको । अनि ती प्याकुरेल अरु कसैका थिएनन्, राष्ट्रपति विद्या भण्डारीका विज्ञ÷सल्लाहकार थिए । जनयुद्धका घाउ बल्झाउने र पूर्व माओवादी विरुद्ध निरन्तर प्रहार गर्ने मुख्य खेती गर्दै आएको इन्सेकको लागि सभामुखमा सापकोटाको चयन आफैमा एउटा झापड थियो । किनभने उनै प्याकुरेल हुन जसले कथित मानवाधिकारवादीका नाममा अग्नि विरुद्ध २०६८ सालमा नै सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा हालेका थिए । त्यसबेला प्याकुरेल पनि पूर्व नेकपा एमाले नै थिए भने सरकार प्रमुखमा पूर्व अध्यक्ष झलनाथ खनाल थिए ।
मदन भण्डारी नेतृत्वको तत्कालीन नेकपा एमालेलाई एनजीओकरण गर्न र पश्चिमाहरुको पैसामा एमालेलाई सुविधाभोगी र कमाउधन्दा मैत्री बनाउन मात्रै होइन, तत्कालीन जनयुद्धलाई अपराध करार गर्न इन्सेकले धेरै बलबुता र पैसा खर्च गरेको तथ्य छरपस्टै छ । तर, त्यही आइएनजीओका संस्थापक सुशील प्याकुरेल दुई पटक राष्ट्रपतिका सल्लाहकारका रुपमा पुरस्कृत भए ।
तर, जब नेकपा एमाले र माओवादीको एकता भयो र माओवादीसहितको नेकपाको सत्तारोहणको दुई वर्ष बित्यो, तब प्याकुरेलहरुको दाल गल्न छोड्यो सायद । त्यसैले पदमा रहुन्जेल राष्ट्रपतिका सब काम र सरकारको जय गान गर्ने उनै प्याकुरेल अग्नि सापकोटा सभामुख बन्ने भएपछि भने बिच्किन थाले । आफैले आफ्नो नाक जोगाउन उनले अन्ततः राष्ट्रपतिको सल्लाहकारबाट राजीनामा दिए वा दिन वाध्य भए ।
माघ १० गते सभामुखका उमेदवार सापकोटाविरुद्ध अदालतमा अर्को उजुरी पर्नु र राष्ट्रपतिका विज्ञ÷सल्लाहकार सुशील प्याकुरलले राजीनामा दिनु एक संयोग जस्तो देखिए पनि यो सल्लाहमा नै विकसित घटनाक्रमको उपज साबित भयो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका विज्ञ÷सल्लाहकार प्याकुरेलले पदबाट राजीनामा दिदा सापकोटलाई सभामुख स्वीकार्न नसकिने कुरा कतै उल्लेख थिएन तर गाँठी कुरो त्यही नै हो ।
शुक्रबार लामो दार्शनिक पाराको विज्ञप्ति जारी गरी प्याकुरेलले राजीनामा दिएको घोषणा गर्नुको मुल कारण के हो भने अहिले संवैधानिक अदालतमा प्रस्तावित सभामुख सापकोटा विरुद्ध विचाराधीन रहेको मुद्धा उनै प्याकुरेलले दायर गरेका थिए । आफैेंले मुद्धा दिएका व्यक्ति सम्माननीय सभामुख हुने पक्का भएपछि सल्लाहकार प्याकुरेल नैतिक दबाबका कारण राजीनामा गर्न वाध्य भएका हुन । तर यो कुरो उनले सिधै आफ्नो राजीनामापत्रमा उल्लेख गरेका छैनन् । कथित लोकतन्त्र र मानवाधिकारको रक्षाको दुहाई दिन आफू नैतिकवान हुन खोज्ने गरी लामो राजीनामा लेखेका छन् ।
द्वन्द्वकालीन मुद्दामा मुछिएका भन्दै आफैले प्रतिवादी बनाएका सापकोटालाई सभामुख उम्मेदवार बनाएपछि आफ्नो होसहवास गुमाएका प्याकुरेलले विज्ञप्ति जारी गरी आपत्ति जनाए पनि रोक्न सकेनन् । अनि आफै वाध्य भएर राजनीतिक, सामाजिक र मानव अधिकारसम्बन्धी सुझाब र सल्लाह दिने गरी २०७४ चैत ९ गते विज्ञ पदमा पाएको राजकीय नियुक्ति त्याग गर्न विवस भए ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सभामुखको उम्मेदवार बनाएका सापकोटाविरुद्ध शुक्रवार सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवर्तमान सल्लाहकार प्याकुरेलकै मुद्धाको प्रतिरक्षा हुने गरी वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको कानुनी चुनौति हो । पुरानो संयोग के भने प्याकुरेल तत्कालीन नेकपा एमालेका पक्षपोषण गर्ने मानवाधिकारवादी आईएनजीओ इन्सेकको हर्ताकर्ता हँुदा नै अग्नि विरुद्ध मुद्धा दिएका थिए । अहिले पनि उक्त मुद्धाको फिरादपत्रवालमा उनकै नाम छ । हाल संवैधानिक इजलासमा रहेको प्याकुरेलले दायर मुद्धाको पेशी यही माघ २२ मा रहेको छ । र, त्रिपाठी चाहि आफ्नै जिल्लामा संसदको चुनाव लडेर हारेका काँग्रेसी भए पनि स्थापित वकिल हुन, जो पूर्व माओवादीका कट्टर आलोचक र विरोधी अभियन्ता पनि हुन । अधिकारकर्मीका रुपमा प्याकुरेल र त्रिपाठीहरु सहयात्रीका रुपमा सडकमा सँगसँगै देखापर्दै आएका थिए । अहिले प्याकुरेल पनि सडकमा आएपछि उनीहरुको अग्नि विरुद्धको अग्रसरता र मोर्चावन्दी बलियो बन्दै जाने देखिन्छ ।
स्मरणीय छ, प्याकुरेलकै नातेदार समेत रहेका डा. कुन्दन अर्याललाई करीब दुई महिनाअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो प्रेस सल्लाहकारबाट हटाएर सूर्य थापालाई नियुक्त गरेका थिए । प्याकुरेल परिवारका लागि सुरुमा निकै फलिफापपूर्ण देखिएको नेकपाको सत्ता क्रमशः भने फाप्न छोड्दै गएको पछिल्ला राजीनामा र वर्खास्तगीका घटनाहरुले देखाएका छन् ।
प्याकुरेलकै माग जसरी वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमा सापकोटालाई सभामुख निर्वाचित नगर्न र तत्काल गिरफ्तार गर्न माग गरिए पनि माघ १२ मा संसदले शानदार रुपमा सापकोटालाई सभामुख निर्वाचित गरिसकेको छ । फौजदरी अभियोगमा मुछिएको व्यक्ति सभामुखको उम्मेदवार रहेको भन्दै सभामुख निर्वाचनको सबै प्रक्रिया रोक्न माग गरिएको आदेश अब मुल्तवीमा परिसकेको छ । अब यो मुद्धा र आफ्नो अघिल्लो मद्धामा प्याकुरेल र त्रिपाठीहरु सँगसँगै उत्रिने वातावरण बनेको छ ।
यसरी आफूलाई मात्रै मानवअधिकार र लोकतन्त्रको मसिहा ठान्ने एक प्याकुरेलका लागि वाध्यताले सल्लाहकार जागिर छोडनु परे पनि उनको डलर खेती भने फेरि सभामुख चयनकै मेसोमा फस्टाउने भएको छ । सायद सल्लाहकार भएर भन्दा सडकमा उत्रेर नाटक मन्चन गर्दा धेरै कमाई हुने भएकैले उनले अग्निको निहुँ बनाएर तत्कालीन माओवादी विरुद्ध नयाँ षडयन्त्रका लागि सडकमा आइपुगेका छन् ।
जनताले चुरो कुरो के बिर्सन हुँदैन भने माओवादी जनयुद्धको वलिदान, राप र तापको परिणाम थियो प्याकुरेलले पाएको जागिर पनि । जतिबेला माओवादी युद्ध मैदानमा लड्दै थिए, प्याकुरेलहरु माओवादीले मारेका मान्छेको लास गनेर तिनको व्यापार गर्दै कथित मानवाधिकार उलंघनको नाममा डलर कमाउँदै थिए ।
अहिले तिनै प्याकुरेलहरु मानावाधिकार र लोकतन्त्रको दुहाई दिन अग्रसर हुनु नेपाली लोकतन्त्रको भद्धा मजाक हो । किनभने नेपाली लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग त्यति कमजोर छैन कि प्याकुरेलहरुले राजकीय लाभको पद सल्लाहकार छोड्दैमा त्यो धर्मराओस् । नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनेको अग्निहरुको संघर्ष र बलिदानको परिणाममा हो न कि प्याकुरेलहरुको कथित कमाउ धन्दाको उपजमा । त्यसैले एक प्याकुरेलको अहिले सडकमा उत्रेर अग्नि वा पूर्व माओवादीहरुलाई सेक्ने र सिध्याउने चालबाजी नयाँ बोतलमा देखिएको पुरानै रक्सी हो, पश्चिमा र माओवादी विरोधी तह र तप्काको ।
सबै राजनीतिक दलका सर्वसम्मत उम्मेदवारका रुपमा अग्नि सभामुख हुँदै गर्दा आफ्नो डलर खेतीको मुहान सुक्ने भय र त्रासले प्याकुरेलहरु प्याक प्याक परेका छन् । यो साँचो अर्थमा जनताको मानवाधिकार र लोकतन्त्रका लागि सुखद पक्ष नै हो । तर मानवाधिकार र लोकतन्त्रको दुहाई दिदै डलर खेती गर्नेहरुका हकमा भने यो एक भाइरस प्रवृति हो जसलाई कमजोर पार्न सबैको सामूहिक प्रतिवाद अपरिहार्य छ ।
प्याकुरेलहरुको दाल नगल्ने भएपछि उनीहरु सडकमा आउन वाध्य हुँदै गर्दा फेरि पनि कनकमणि दीक्षित, चरण प्रसाईहरुको कित्ता उनको सहयात्री बनेको छ । दिनेश त्रिपाठीहरुको हिस्सा उनीहरुको सहयोगी बनेको छ । यसको मतलव पूर्व माओवादी कित्ता अझै प्रहारको निशानामा परिरहेको छ भन्ने सबक पनि पूर्व माओवादीलाई मिलेकै हुनुपर्छ । अब सबै खाले प्याकुरेल प्रवृत्तिको समूल अन्त्यका लागि पूर्व माओवादी तथा हालका एकीकृत अर्थात नेकपा शक्ति समूह एकतावद्ध र दृढ हुनु नै प्याकुरेल प्रवृत्ति विरुद्धको प्रतिरक्षा हुनेछ । यसमा भने सबैको बेलैमा चेत खुलेको बेस ! समयबद्ध साप्ताहिकबाट
आस्था राउत रिहा
सहकर्मीको आक्रमणबाट पाँच अफगानिस्तान प्रहरीको हत्या
अफगानिस्तानको दक्षिणी कान्दाहर प्रान्तमा रहेको एक चौकीमा आफ्नै सहकर्मीको आक्रमणमा...